Ogaden News Agency (ONA) – Jabhadaha Itoobiya Kasoo Horjeeda oo Canbaareeyay Faragalintii Ogadenia Lagu Sameeyay.
Jabhadaha Itoobiya Kasoo Horjeeda oo Canbaareeyay Faragalintii Ogadenia Lagu Sameeyay.
Posted by Dulmane	/ August 6, 2018
Habeenimadii xalay Isniinta ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 6/8/18 waxaa shir muhiim ah isugu yimid 18 jabhadood oo ladagaalanta Gumaysiga madow ee mudada dheer dulsaaraa dadyowga kala duwan ee ku dhaqan Itoobiya.
Kulankan oo lagu qabtay khadka isgaadhsiinta waxaa Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya (JWXO) u matalayay Hogaanka Warfaafinta, Mudane Xassan Macalim oo kulanka khudbad qiimo badan kasoo jeediyay.
Ugu horayba xubnihii kulanka kasoo qayb galay ayaa si mug leh u kala war qaatay wuxuuna xubin kasta kawarbixiyay umadii uu matalayay iyo guud ahaan wixii dhacay mudadii la kala maqnaa. Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Xassan Macalim ayaa siwayn uga warbixiyay xaalada guud ee wadanka Ogaadeeniya iyo marxalada uu hada marayo, iyo waliba mowqafka ONLF ee ku aadan marxalada lagu jiro.
Mudane Xasan ayaa xubnihii kulanka kasoo qayb galay uga warbixiyay faragalintii milatariga Itoobiya ee Ogaadeeniya iyo kacdoonkii shacabka ee kadhashay, wuxuuna Mudanuhu mid mid u kor istaagay dhacdooyinkii dhacay iyo dadkii shacabka ahaa ee lagu xasuuqay halkaas.
Mudane xasan ayaa sheegay in Jabhada ONLF ay aad uga soo horjeedo faragalinta qaawan ee ciidanka gumaysigu uu kusameeyay wadanka Ogaadeeniya, isla markaana uu kulaayay dad shacab ah ee aan waxba galabsanin, Kuna burburiyay hanti badan oo ay lahaayeen shacabka Soomaalida Ogaadeenya iyo shacabka Itoobiyaanka ah ee ku dhaqnaa gudaha Ogaadeeniya.
Waxaa kale oo uu Mudanuhu cadeeyay in Jabhada ONLF aysan difaacaynin maamulkii gumaysigu uu samaystay ee Jigjiga fadhiyay balse ay difaacayaan karaamada iyo sharafta dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogaadeeniya oo lagu sameeyay bahdil iyo handadaad ka mug wayn midii horay loogu hayay.
Intaas kadib xubnihii kale ee matalayay Jabhadaha kale ayaa si wada jir ah u canbaareeyay howlgalkii sharci darada ahaa ee ciidanka gumaysigu uu ka fuliyay wadanka Ogaadeeniya kuna handaday shacabka ay dhibaatooyinku daashadeen ee Ogaadeeniya.
Dhinaca kale kulankan oo mudo dheer socday ayaa lagu qaadaa dhigay qorshihii lagaga gudbi lahaa marxaladahan cusub waxaana kulankan lagu dajiyay qorshe shaqeed dhowr qodob kakooban oo lagu xalinayo marxaladaha cusub iyo dhawaaqyada kasoo baxaya maamulka cusub ee wadanka Itoobiya.
Jabhadaha kulanka kasoo qayb galay ayaa sheegay in ay iyagu matalaan 80% dadka ku dhaqan wadanka Itoobiya, waxayna sheegeen in uusan waxba kajirin kulan kasta oo loo qabto dad aan shacabka matalin ama koox yar oo dano gaar ah leh.
Guntii iyo gunaanadkii xubnihii kulanka kasoo qayb galay ayaa isla qaatay in la adkeeyo xidhiidhka Jabhadaha korna loo qaado abaabulka kudaha ee shucuubta kala duwan ee la gumaysto.